သခှားသီးကို တနတေ့လုံး စားပေးရငျ ရရှိလာမယျ့ ကောငျးကြိုး (၁၃) ခကျြ
HomeKnowledgeသခှားသီးကို တနတေ့လုံး စားပေးရငျ ရရှိလာမယျ့ ကောငျးကြိုး (၁၃) ခကျြ
အိန်ဒိယနိုငျငံမှာ ရှေးခတျေ ကတညျးက သခှားသီးကို အစားအစာ အဖွဈရော၊ ရိုးရာဆေး အဖွဈပါ အသုံးပွုခဲ့ကွ ပါတယျ။ အိန်ဒိယနိုငျငံ လိုမြိုး ရာသီဥတုပူတဲ့ နိုငျငံမှာ သခှားသီးက ခန်ဓာကိုယျမှာ ရဓောတျ ဖွညျ့ဖို့ အတှကျ မရှိမဖွဈ လိုအပျပါတယျ။
1. သခှားသီးက အာရုံကွောနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ ရောဂါတှကေို ကာကှယျပေး ပါတယျ။
သခှားသီးက ဦးနှောကျ ကနျြးမာရေး အတှကျ အလှနျအကြိုးပွုပါတယျ။ သခှားသီးမှာ ဖော့စဖောရပျလညျး ပါဝငျတာကွောငျ့ ဖော့စဖောရပျ ခြို့တဲ့ခွငျးကွောငျ့ ဖွဈတဲ့ ရောဂါတှကေို ကာကှယျပွီးသား လညျး ဖွဈစေ ပါတယျ။ သခှားသီးကို မှနျမှနျ စားပေးရငျ ဦးနှောကျ ထကျမွကျလာ မှာပါ။
2. အဆီပိုတှေ ကိုလညျး ကစြေ ပါတယျ။
သခှားသီးမှာ ရဓောတျ ပါဝငျတာကွောငျ့ အစားတှေ အမြားကွီး မစားမိအောငျ ထိနျးခြုပျပေး ပါတယျ။ သခှားသီးမှာ အဆီလညျး မပါဝငျပါဘူး။ ကယျလိုရီ လညျး နညျးနညျးပဲ ပါဝငျပါတယျ။ ကိုယျအလေးခြိနျလြှော့ဖို့ စဉျးစားနရေငျ သခှားသီးကို ရှေးခယျြသငျ့ ပါတယျ။
3. အူမကွီးကငျဆာ ဖွဈနိုငျခွကေို နညျးသှားစပေါတယျ။
သခှားသီးမှာ fisetin ဒွပျပေါငျး ပါဝငျပါတယျ။ Fisetin က အူမကွီး ကငျဆာ ဖွဈနိုငျခွကေို လြှော့ခပြေးမှာပါ။
4. အစာခဖြေကျြမှုကို တိုးတကျစေ ပါတယျ။
သခှားသီးမှာ အမြှငျဓာတျနဲ့ ရဓောတျ ပါဝငျတာကွောငျ့ အစာခဖြေကျြမှုကို အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ နစေ့ဉျ အစားအစာထဲမှာ သခှားသီးကို ထညျ့သှငျးစားသငျ့ ပါတယျ။
5. ခန်ဓာကိုယျမှာ ရဓောတျ ပိုပွညျ့လာစေ ပါတယျ။
သခှားသီးရဲ့ 95 ရာခိုငျနှုနျးမှာ ရဓောတျ ပါဝငျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သခှားသီးကို နစေ့ဉျ စားပေးရငျ ခန်ဓာကိုယျမှာ ရဓောတျ ဖွညျ့ပွီးသား ဖွဈစမှောပါ။
6. အသားအရကေို ပိုပွီး နူးညံ့လာစေ ပါတယျ။
သခှားသီးမှာ ရဓောတျ ပါဝငျတာကွောငျ့ အသားအရအေတှကျလညျး အကြိုးရှိပါတယျ။ ဗီတာမငျ B,C နဲ့ ဇငျ့ဓာတျက အသားအရကေို လှစတေဲ့ အဓိက အာဟာရဓာတျတှေ ပါပဲ။ သခှားသီးမှာ ပါဝငျတဲ့ caffeic အကျဆဈက အသားအရေ တှနျ့ခွငျးကို ကာကှယျပေးပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အရေးအကွောငျးတှမေဖွဈဖို့ ဆိုရငျ သခှားသီးက အကောငျးဆုံးပါပဲ။
7. သခှားသီးက ဆံပငျကြှတျခွငျးကို သကျသာစပေါတယျ။
သခှားသီးမှာပါဝငျတဲ့ ဗီတာမငျ B က ဦးရပွေားနဲ့ ဆံပငျ ကနျြးမာရေးအတှကျ အကြိုးရှိပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Victim, ဗီတာမငျ B5, B6,ဗီတာမငျ Cတို့က အရှယျမတိုငျခငျ ဆံပငျကြှတျခွငျးနဲ့ ဆံပငျဖွူခွငျးအတှကျ ကာကှယျပွီးသား ဖွဈစပေါတယျ။
8. နှလုံးသှေးကွောကနျြးမာရေးကို တိုးတကျစပေါတယျ။
သခှားသီးမှာ ပိုတကျဆီယမျ၊ မဂ်ဂနီဆီယမျ၊ ဗီတာမငျKပါဝငျပါတယျ။ အဲဒီအာဟာရ သုံးမြိုးက နှလုံးသှေးကွောစနဈ အတှကျ အရေးပါပါတယျ။ သခှားသီးက သှေးထဲက ကိုလကျစထရောlevelကိုလညျး ကစြပေါတယျ။
9. သှေးတှငျး သကွားဓာတျကျလညျး ထိနျးညှိပေးပါတယျ။
သုတသေနတှအေရ သခှားသီးဟာ သှေးတှငျးသကွားဓာတျကို ထိနျးညှိပေးနိုငျပါတယျ။ သခှားသီးမှာ phenolic ဒွပျပေါငျးနဲ့ caffeic အကျဆဈပါဝငျလို့ပါ။
10. အရိုးတှကေို ပိုသနျမာစပေါတယျ။
အရိုးတှအေတှကျ လိုအပျတဲ့ ဗီတာမငျKနဲ့ကယျလျဆီယမျတှဟော သခှားသီးထဲမှာ ပါဝငျပါတယျ။ ဗီတာမငျ K က အရိုးကြိုးခွငျး၊ အကျခွငျးကို နညျးသှားစပေါတယျ။ အရိုးထဲကို ကယျလျဆီယမျစုပျယူနိုငျဖို့အတှကျ ဗီတာမငျ Kက အရေးပါပါတယျ။
11. ခန်ဓာကိုယျမှာ အဆိပျအတောကျကငျးစပေါတယျ။
သခှားသီးက အဆိပျအတောကျတှကေို ဖယျရှားပေးတဲ့ သဘာဝအသီးအနှံ ဖွဈပါတယျ။ သခှားသီးကို ပုံမှနျစားတဲ့အခါ အသညျး၊ အူထဲက အဆိပျတှေ ကငျးသှားပွီး ကနျြးမာရေး ပိုကောငျးလာမှာပါ။
12. သှားကနျြးမာရေးကိုလညျး တိုးတကျစပေါတယျ။
သခှားသီးမှာ ဖလိုရိုကျပါဝငျတာကွောငျ့ သှားပိုးစားခွငျးကို သကျသာစေ ပါတယျ။ သခှားသီးမှာ ပါဝငျတဲ့ ကယျလျဆီယမျက သှားတှကေို ခိုငျမာစေ ပါတယျ။
13. ဟျောမုနျးတှကေိုလညျး ညီမြှစပေါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျမှာ ဟျောမုနျးတှညေီမြှဖို့ အတှကျ ဖော့စဖောရပျက အဓိက အာဟာရဓာတျ ပါပဲ။ သခှားသီးမှာ ဖော့စဖောရပျ4ရာခိုငျနှုနျးခနျ့ ပါဝငျတာကွောငျ့ အရှယျရောကျပွီး သူတှကေ သခှားသီးကို နစေ့ဉျစားပေးသငျ့ပါတယျ။
သခွားသီးကို တနေ့တလုံး စားပေးရင် ရရှိလာမယ့် ကောင်းကျိုး (၁၃) ချက်
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ရှေးခေတ် ကတည်းက သခွားသီးကို အစားအစာ အဖြစ်ရော၊ ရိုးရာဆေး အဖြစ်ပါ အသုံးပြုခဲ့ကြ ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ လိုမျိုး ရာသီဥတုပူတဲ့ နိုင်ငံမှာ သခွားသီးက ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ် ဖြည့်ဖို့ အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။
1. သခွားသီးက အာရုံကြောနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပေး ပါတယ်။
သခွားသီးက ဦးနှောက် ကျန်းမာရေး အတွက် အလွန်အကျိုးပြုပါတယ်။ သခွားသီးမှာ ဖော့စဖောရပ်လည်း ပါဝင်တာကြောင့် ဖော့စဖောရပ် ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပြီးသား လည်း ဖြစ်စေ ပါတယ်။ သခွားသီးကို မှန်မှန် စားပေးရင် ဦးနှောက် ထက်မြက်လာ မှာပါ။
2. အဆီပိုတွေ ကိုလည်း ကျစေ ပါတယ်။
သခွားသီးမှာ ရေဓာတ် ပါဝင်တာကြောင့် အစားတွေ အများကြီး မစားမိအောင် ထိန်းချုပ်ပေး ပါတယ်။ သခွားသီးမှာ အဆီလည်း မပါဝင်ပါဘူး။ ကယ်လိုရီ လည်း နည်းနည်းပဲ ပါဝင်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ဖို့ စဉ်းစားနေရင် သခွားသီးကို ရွေးချယ်သင့် ပါတယ်။
3. အူမကြီးကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေကို နည်းသွားစေပါတယ်။
သခွားသီးမှာ fisetin ဒြပ်ပေါင်း ပါဝင်ပါတယ်။ Fisetin က အူမကြီး ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးမှာပါ။
4. အစာချေဖျက်မှုကို တိုးတက်စေ ပါတယ်။
သခွားသီးမှာ အမျှင်ဓာတ်နဲ့ ရေဓာတ် ပါဝင်တာကြောင့် အစာချေဖျက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် နေ့စဉ် အစားအစာထဲမှာ သခွားသီးကို ထည့်သွင်းစားသင့် ပါတယ်။
5. ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ် ပိုပြည့်လာစေ ပါတယ်။
သခွားသီးရဲ့ 95 ရာခိုင်နှုန်းမှာ ရေဓာတ် ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သခွားသီးကို နေ့စဉ် စားပေးရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ် ဖြည့်ပြီးသား ဖြစ်စေမှာပါ။
6. အသားအရေကို ပိုပြီး နူးညံ့လာစေ ပါတယ်။
သခွားသီးမှာ ရေဓာတ် ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေအတွက်လည်း အကျိုးရှိပါတယ်။ဗီတာမင် B,C နဲ့ ဇင့်ဓာတ်က အသားအရေကို လှစေတဲ့ အဓိက အာဟာရဓာတ်တွေ ပါပဲ။ သခွားသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ caffeic အက်ဆစ်က အသားအရေ တွန့်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အရေးအကြောင်းတွေမဖြစ်ဖို့ ဆိုရင် သခွားသီးက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
7. သခွားသီးက ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။
သခွားသီးမှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင် B က ဦးရေပြားနဲ့ ဆံပင် ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Victim, ဗီတာမင် B5, B6,ဗီတာမင် Cတို့က အရွယ်မတိုင်ခင် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနဲ့ ဆံပင်ဖြူခြင်းအတွက် ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်စေပါတယ်။
8. နှလုံးသွေးကြောကျန်းမာရေးကို တိုးတက်စေပါတယ်။
သခွားသီးမှာ ပိုတက်ဆီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဗီတာမင်Kပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီအာဟာရ သုံးမျိုးက နှလုံးသွေးကြောစနစ် အတွက် အရေးပါပါတယ်။ သခွားသီးက သွေးထဲက ကိုလက်စထရောlevelကိုလည်း ကျစေပါတယ်။
9. သွေးတွင်း သကြားဓာတ်က်လည်း ထိန်းညှိပေးပါတယ်။
သုတေသနတွေအရ သခွားသီးဟာ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ သခွားသီးမှာ phenolic ဒြပ်ပေါင်းနဲ့ caffeic အက်ဆစ်ပါဝင်လို့ပါ။
10. အရိုးတွေကို ပိုသန်မာစေပါတယ်။
အရိုးတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်Kနဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်တွေဟာ သခွားသီးထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် K က အရိုးကျိုးခြင်း၊ အက်ခြင်းကို နည်းသွားစေပါတယ်။ အရိုးထဲကို ကယ်လ်ဆီယမ်စုပ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် ဗီတာမင် Kက အရေးပါပါတယ်။
11. ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆိပ်အတောက်ကင်းစေပါတယ်။
သခွားသီးက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးတဲ့ သဘာဝအသီးအနှံ ဖြစ်ပါတယ်။ သခွားသီးကို ပုံမှန်စားတဲ့အခါ အသည်း၊ အူထဲက အဆိပ်တွေ ကင်းသွားပြီး ကျန်းမာရေး ပိုကောင်းလာမှာပါ။
12. သွားကျန်းမာရေးကိုလည်း တိုးတက်စေပါတယ်။
သခွားသီးမှာ ဖလိုရိုက်ပါဝင်တာကြောင့် သွားပိုးစားခြင်းကို သက်သာစေ ပါတယ်။ သခွားသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်က သွားတွေကို ခိုင်မာစေ ပါတယ်။
13. ဟော်မုန်းတွေကိုလည်း ညီမျှစေပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဟော်မုန်းတွေညီမျှဖို့ အတွက် ဖော့စဖောရပ်က အဓိက အာဟာရဓာတ် ပါပဲ။ သခွားသီးမှာ ဖော့စဖောရပ်4ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပါဝင်တာကြောင့် အရွယ်ရောက်ပြီး သူတွေက သခွားသီးကို နေ့စဉ်စားပေးသင့်ပါတယ်။